ऊ त्यति बेला किसोर अबस्थाकै थियो, भारी बोकेर गुजारा गर्ने उसको बाबुले रातमा डराई-डराई “...अब श्री ३ को सरकार जान्छ र ‘रामराज्य’ आउँछ...” भनेको उसले सुन्ने गरेको थियो । ‘श्री ३’ र ‘श्री ५’ भनेको के हो भन्ने नबुझे पनि ‘रामराज्य’मा भने उसको विशेष ध्यान थियो । अक्षर-कागज नपढेको भएपनि गाउँमै सुनेको रामायणको कथाको आधारमा उसले सो ‘रामराज्य’ आएपछि सबैले सुख पाउनेमा ढुक्क थियो ।
उसले दशकौँ भारी बोकेपछि देशमा फेरि निकै हलचल भएको भान उसले पायो। ठूला-ठूला कुरा नबुझे पनि यस पाला भने देशमा असली प्रजातन्त्र आउँछ रे अनि सबैले सुख पूर्वक बाँच्न पाउँछन् रे भन्ने सम्म उसले पनि बुझ्यो । राजनैतिक वृत्त र उपल्लो तहमा के कस्ता परिवर्तन भए उसले भेउ सम्म पनि पाएन । तर गाउँकै नेताहरूले “...अब तिमीहरू सबै सही अर्थमा स्वतन्त्र भएका छौ...” भनेको उसले पनि सुन्यो ।
उसको छोराले भारी बोक्न थालेको केही वर्ष पछि देशमा फेरि परिवर्तनका आवाजहरु उठ्न थाले । धेरै सम्मको चर्काचर्की र जोडतोडमा कहाँ, कहाँ के कस्ता छल-फल, लेन-देन र बाँडफाँडमा कुरा भए उसले बुझेन । तर गाउँको चौतारीमा घाम ताप्दै गर्दा उसले फेरि गाउँका नवनेताहरुले “अब भने हामीहरु साँचो अर्थमा देशका नागरिक भयौँ र अब हाम्रा कुनै मालिक छैनन् हामी ने देशका मालिक भयौँ ...जनता अब सम्प्रभूसत्ता सम्पन्न भए...” भनेको सुन्यो ।
ऊ चौतारीबाट जुरुक्क उठ्यो र वनदेवी थानमा पुग्यो । फाटेको चप्पल भएपनि त्यसलाई फुकालेरै वनदेवीको अगाडि लम्पसार पर्‍यो र निन्याउरो मुख लगाएर मनमनै देवीसँग पुकारा गर्न लाग्यो : “ हे माता!, रामराज्य, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र केही चाहिएको छैन.... तर मेरो पुर्पुरोको नाम्लो र भारी मेरो नातीले भने व्यहोर्न नपरोस्...”
inashrestha 2/12/10 8:34 AM
wow!story tellsatale, but true.
बिष्णुनन्द चाम्लिङ्ग 2/12/10 10:59 AM
यो लघुकथालाई समय सान्दर्भिक देशको बास्तबिक कथा भन्न रुचाउँछु म । कुँदिएका शब्दहरुमा जडिएका सुन्दर भावका थुङ्गाहरु बेजोड सुहाएको छ । संदेश प्रबाहका निम्ति जन्मेको यो लघुकथाले जनचेतना जनजनसम्म अबश्य फैल्याउँने छ । दिलिप जी हजुरको कलमले यस्तै सन्देशमूलक लेखहरु निर्नतर लेखिरहोस ।
Anonymous 2/12/10 7:44 PM
राम्रो कथा ।
तर धेरै नेपालीका लागी यो कथा नभएर वास्तविकता भएको छ । राजनैतीक infrastructures हरुको स्थापना नभए सम्म प्रजातन्त्रको सहि मायना हुंदैन, त्यसैले नयाँ सोच/ विचारधराहरको विकास् भैरहनु नौलो होइन । तर हाम्रो दुर्भाग्य, अहिले सम्मका सबै "प्रगती"हरु केवल शब्दमा मात्र सिमित भएका छन । ठुला र गरुंगा शब्दहरु नयाँ आए, प्रजातन्त्रको उपयोग भन्दा पनि दुरपयोग् बढी भयो :(
Luna 3/12/10 1:54 AM
' लघु कथा शिरोमणि ' जी !
हाम्रो जिजुबाले त्यो बेलाको सरकारका प्रतिनिधि आदि लाइ - राजा देखि प्रम -
मन्त्रि हुदै सबै कुर्चीका जजमानहरुलाइ कसरि नमस्ते गर्थे ? धन्नै धन्नै भूइ
नै छूएर . हाम्रा बाले कसरि गरे ? जिउ जस्ताको तस्तै राखी यस्सो टाउको मात्रै
निहुराएर . तपाइले - मैले कसरि गर्छौ ? शरीर र टाउकोलाइ आफू संगै राखी हातले नमस्कार गर्छौ . यो परिबर्तन कै कारण हो . आर्थिक परिवर्तनको कुरामा पनि हाम्रा जिजु बा ले कसरी क लेखे अनी हामीले कसरी क लेख्यौ ?
अब कामको कुरा भन्ने हो भने त्यो बेलाको हाम्रा जिजु बा का नाना सिउने दर्जीका नाति - पनातिको नाना मैले सिलारहेकी हुने छु यदि म मा लुगा सिउने कला छ भने । परिवर्तन नभएको होइन तर हुनु पर्ने जती द्रुत गतिमा चै हुन सकेन मुलुक घिचुबा नेताहरुले गर्दा ।
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) 4/12/10 3:34 PM
यो देशमा अहिलेका जस्त क्रान्तिकारी नेता भनाउदाहरु कहिल्यै नजन्मिउन !
शक्ति पृथकिकारण लागु गर्न सक्ने र राष्ट्रिय विकाशको योजनालाइ अघि ल्याउनेहरु भन्दा विबाद मा फस्न चाहानेहरु बढी भए !
दीपक जडित 6/12/10 12:40 AM
सदा जस्तै वजनले खँदिलो लघुकथा । कथाभित्रको कथाले पनि छोयो ।
Anonymous 8/12/10 5:49 PM
दिपक ░ www.facebook.com/dendstha
परिवतनको खाका तयार पार्ने र यसैमा रमाउने जमातमा सुख र शान्तिको कोरा कल्पनाबाहेक थप के कुरा हासिल गर्न सकिएला र! यस्तै देखिएको र लेखिएकोमा लेखक: दिलिप दा'को एकदमै सरल र समयसापेक्ष तथ्यलाई कथात्मकरुपमा उतारेकोमा मेरोतर्फबाट स-धन्यवाद छ ।